सहमति गरौ - उदारणीय बनौ - चिनिया दुवाल - चारदिशा
सहमति गरौ – उदारणीय बनौ – चिनिया दुवाल –
February 10, 2017 Om Sharma बिबिध,राजनिति
हामी मुलुक भन्दा सात समुन्द्रपारी छौ। संसारभर एउटै बिचार एउटै सिदह्न्त र आदर्श बोकेका लोकतन्त्र पक्षधरको साझा विदेशस्थित नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक संगठन हो जन सम्पर्क समिति। हामी लोकतन्त्र र समाजवादका पर्याय पनि हौ। त्यसैले त् यो संगठनमा सबै जाति बर्ग क्षेत्र लिङ्गको छाहारी हो। हाम्रो संगठनमा सबै फुलहरुलाई फुलाउनु हाम्रो कर्तब्य हो। सन् २००० सालमा सस्थापक अधक्ष्य ध्रुबराज पौडेलको नेतृत्वमा सुरु भयको यो संगठन २०१७ को सुबाश जोशी सन्तोषको नेतृत्वको उत्तरार्द सम्ममा आपिपुग्दै गर्दा यो संगठनले धेरै उतार चढाब गर्दै ठुलो फन्को मारी सकेको छ। यस कार्यकालमा हामीले केहि अप्ठ्याराहरू समेत सामाना गर्न पर्यो । दृष्टकोणहरूको मतभिन्नता तथा बुझाइको विविधताले एकै कुरा राम्रो र नराम्रो लाग्ने मानवीय स्वाभाव हो, तथापी सम्पन्न गरेका बिबिध रचनात्मक तथा राजनीतिक गतिविधीहरुले यस कार्यकालमा नेपाली जनसंपर्क समितिलार्इ संस्थागत बनाउन, संगठनमा एकता कायम राख्न तथा अन्य प्रगतिका दृष्टिकोणले ज्यामितिय तरिकाले समितिले उपलब्धी हाँसिल गरेको छ भन्ने मलाइ लाग्दछ ।
म यो भूमिका किन लेख्दैछु भने आगामी ५ मार्चमा हाम्रो संगठनको चौथौ अधिवेशन हुदैछ। म स्वयम सभापति शेर बहादुर देउवासंग भेटेर आधिकारिक निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेर आए। सम्भब भयसम्म उहानै आउने भन्नु भएको छ। आगामी अधिबेशनले भोट खसाल्ने र नेतृत्वमा को चयन गर्ने मात्र हुनुहुन्न, अधिबेशनको केन्द्रिय बिषय भनेको आगामी दुइ बर्षसम्म के कस्तो कार्य योजना तजुर्मा गर्ने तथा संगठन र देशको लागि के के गर्न सकिन्छा बिशेसगरि पोस्ट अर्थकुइक निर्माणमा हामीले के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा पनि गहन बहस हुनू जरुरि छ। साथै केहि महिनामा हुन गैरहेको स्थानीय निकायको चुनाबमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुले पार्टीका लागि कस्तो भूमिकाका बारेमा बन्दसत्रमा बिशेस छलफल गरि ठोस योजनाहरु संसारभरिका जन सम्पर्क समितिहरु बीच शेयेर गर्नू पर्छ। यद्यपी कुनै पनि राजनीतिक संगठनमा बिभिध बिचार हुनू नौलो कुरा हैन र सहमति असहमति पनि हुन्छन। असहमति बीच पनि सक्दो सहमति गरि एकताको संगठन कायम राख्नू जरुरि छ। एकताको शक्तिले जन सम्पर्क समितिले गैर आवासिय नेपाली संगठनमा निर्णायक भूमिका राखने छ। यदि हामी अहिले सहमति सहकार्य गरेर अगाडि बढन सकेनौ भने तेस्रो अधिवेशनमा हामी विभाजन भएर भोगेको गम्भीर परिणाम फेरि दोहोरिने छ। त्यसैले हामी सबैले आ आफ्नो हठ र व्यक्तिगत इगो त्याग गरेर सहमति गर्दै विश्वमा जन सम्पर्क समिति बेल्जियम उदारणीय बन्नुको कुनै बिकल्प छैन। कथंकदाचित सर्बसम्मत हुनै सकेन अरे, लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक पार्टीको भात्री सङ्गठन हो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गरि २०१३ मा झैँ नया नेतृत्व चयन विकल्प छैन।
यति भन्दै गर्दा, मैले भनै पर्छ, हामी जब जब हामी फ़ुट्योउ तब तब संगठनले हार्यो, ब्यक्ती बिसेशको हाबी र हारजित भयो। तसर्थ मिल्दा मात्र हामीले सोचेको र चिताएको परिणाम प्राप्त गर्ने छौ। म सोच्दैछु निकट भविष्यमा हुन् गैरहेको एन आर एनको एन सी सी होस् वा अन्तरास्त्रिय समन्न्वय समितिको चुनाब होस। त्यसलाई आफ्नो पक्कडबाट उम्कन नदिन हामी एकजुट हुनु पर्छ। त्यसैका लागि हाम्रा सस्थापक अग्रजहरुले सबैलाई मिल्न र मिलाउन अभिप्रेरित गर्नु हुनेछ भन्ने मलाइ बिस्वास छ। हिजो जे भयो भयो अब हुन् नदिनु बुद्धिपूर्ण मानिन्छ । अब हामीले के गर्ने ? अग्रजहरुको पहलमा हिजो के भयो त्यसलाई भुलेर नेतृत्वका प्रतिश्पर्दी बीचमा बार्ता र सहमति गर्ने। सहमति को नजिक पुग्न धेरै ठुला सुत्रहरुले बुन्नु पर्दैन, एन आर एन बेल्जियम , युरोप र अन्तराष्टिय संगठनको लागि हाम्रा साझा उम्मेदवार उठाउने र मन बचन कर्मले लागि पर्ने। परिणाम हाम्रै हातमा छ ! बेला छदै सोचौ। भुइँको टिपन खोज्दा आफ्नो खल्तीको नगुमाउ। स्मरण रहोस क्रियाशील भएर खटिने साथीहरु हामी बीच धेरै छैनम र संसोधित बिधानले पनि सबै साथीहरुलाइ अटाउने समिति निर्माण गर्ने बाटो प्रसस्त गरेको मेरो बुझाइ रहेको छ।
दुवाल नेपाली जन समपर्क समितिबेल्जियमका महामन्त्री हुन
ब्रुसेल होलिडे फियरमा नेपाल
जसस नेदरल्यान्डको खुल्ला अन्तर्कृया कार्यक्रम सम्पन्न